Imaaradka Carabta oo la sheegay inuu ku xadgudbay Cunaqabateynta saaran Soomaaliya – Bandhiga
Imaaradka Carabta oo la sheegay inuu ku xadgudbay Cunaqabateynta saaran Soomaaliya
Warbaahinta caalamiga ah ee Aljazeera ayaa soo bandhigtay warbixin ay ka heshay Guddiga Qaramada Midoobey u qaabilsan la socodka Cunaqabateynta saaran Soomaaliya iyo Eritrea, taasoo muujineysa in Imaaraadka Carabta uu ku xadgudubtay cunaqabateynta Soomaaliya.
Aljazeera ayaa warbixinta ku sheegtay in Imaaraadka Carabta uu ku xadgudbay cunaqabateynta Soomaaliya, marka la eego dhismaha sharci darada ee Saldhigga Milateriga uu ka sameysanayo Berbera ee Somaliland, arrinta dhoofinta Dhuxusha oo Imaaraadka Carabta loo suuq geeyo.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in loo gudbiyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay iyadoo hadda aan si rasmi ah loo shaacin wali.
Shirkado laga leeyahay Iiraan ayaa lagu sheegay xogta Aljazeera in ay ku soo biireen dhoofinta Dhuxusha Soomaaliya, lana geeyo Dubai.
Hub iyo qalab milateri oo laga qabtay Xeebaha Soomaaliya ayaa kujirta xogta la helay in Soomaaliya lagu baahiyay, kuwaasoo ka yimid dhanka Yemen, waxaana la sheegay in hubkaas laga soo iibiyay dalalka Bulgaria iyo Serbia, oo markii la weydiiyay ay sheegeen in Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ka iibsadeen.